Brainhost बाट नि: शुल्क Pinterest मार्केटिंग गाइड Martech Zone
Brainhost बाट नि: शुल्क Pinterest मार्केटिंग गाइड
शुक्रबार, अप्रिल 13, 2012 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
ब्रेनहोस्टका व्यक्तिहरूले मलाई तिनीहरूका नयाँ गाईड प्रचार गर्ने लाइन छोडे, कसरी पिन्टेरेस्टको साथ तपाईंको वेबसाइट प्रमोट गर्ने र मलाई लाग्छ कि तिनीहरूले यसमा राम्रो काम गरेका छन्!
यहाँ गाईडबाट Ex वटा अंशहरू छन् जुन तपाईले उपयोगी पाउनुहुनेछ।
हाल, चोबानी दही, डायसन भ्याकुम क्लीनर, Etsy.com, र प्रसिद्ध नाइके जुत्ता ब्रान्डको जटिल लोकप्रिय पिनटेरेस्ट पृष्ठहरू छन्। के तिनीहरूको पृष्ठहरू वा बोर्डहरू लाई आकर्षक बनाउँछ कि तिनीहरू बिक्री पृष्ठहरूको रूपमा प्रयोग हुँदैनन् तर यसको सट्टामा हुन् दृश्य अभिव्यक्ति ब्रान्ड वा सेवा छनौट गर्नेहरूले आनन्द लिने संस्कृति वा जीवन शैलीको बारेमा।
पिन गर्दा सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ सही नेटवर्किंग गतिविधिहरूको साथ साझेदारी (उदाहरण को लागी, ती ती हुन् जसले टिप्पणी छोड्छन्, "repin" र जो अरूलाई पछ्याउँछन जसले Pinterest गतिविधिबाट सर्वाधिक प्रतिफल देख्दछन्)। स्वार्थी नहुनुहोस्। कुनै पनि सामाजिक क्रियाकलापको साथ, अरूलाई प्रबर्धन गर्दा अन्ततः उनीहरूको पक्षमा फर्कन दिनेछ। यदि नेटवर्क तपाईंको उद्योगमा छ भने, तपाईं केहि नयाँ साथीहरू फेला पार्नुहुनेछ र तिनीहरूसँग तपाईंको अधिकार निर्माण गर्न जारी राख्नुहुनेछ।
त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई अनुसरण गर्न र सबै गतिविधिहरू सुरू गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको खातालाई फाइदा हुनेछ। उदाहरणका लागि, त्यो बेकरलाई हामीले यस गाईडभरि उल्लेख गर्दैछौं ओभन उत्पादकहरू, बेकि supplies आपूर्तिका निर्माताहरू, स fellow्गी बेकर्स, कूकबुक लेखकहरू, फूड कम्पनीहरू, र अधिक। यी पिनरहरू मध्ये कुनैले पनि बेकरको पिनहरू सान्दर्भिक र कमेन्टमा फेला पार्न सक्दछ, जस्तै, वा तिनीहरूलाई पुनः रिप गर्नुहोस्। यसले श्रोतालाई बढाउछ र ठूलो पार्दछ अधिक यातायात को लागी संभावना बढाउँछ वेबसाइट वा ब्लगमा।
Pinterest राम्रो विकास र एक ठोस स्पटलाइट छ। हामीले यस बारे लेखेका छौं Pinterest मा संलग्नता, एक जोड्दै WordPress मा Pinterest Pinit बटन र केहि साझा Pinterest जनसांख्यिकी। हामीसँग हाम्रो व्यापक पिन्टरेस्ट पृष्ठ पनि छ मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स.
टैग: ब्रेनहोस्टPinterestpinterest गाइडpinterest marekting मार्गदर्शन
WordPress मा सह-लेखक पोस्ट
मई 26, 2012 मा 3: 13 एएम
मैले मेरो साइटलाई अप्टिमाइज गर्न pinterest प्रयोग गरेको छु र नतिजा अचम्मको थियो मेरो साइट 182 हप्ताको समयमा #7 बाट #3 मा उफ्रिएको थियो।
चाल यो हो कि हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई पिन गर्नु पर्छ र धेरै व्यक्तिहरूले पुन: पिन गर्नु पर्छ यो सबैभन्दा कठिन भाग हो। धेरै जसो Pinterest प्रयोगकर्ताहरूले हामीले पिन गरेको जस्तो नभएको बेला रिपिन गर्दैनन्।
मैले यसलाई Fiverr मा आउटसोर्स गर्नको लागि साधारण कुरा गर्छु र मेरो साइटलाई 75 जनाले पिन गरेको छु, मलाई थाहा छैन उसले यो कसरी गर्न सक्छ केवल Fiverr मा pinterest टाइप गरेर खोज्नुहोस् र तपाईंले यसलाई TOP मा पाउनुहुनेछ। धेरै अन्य विक्रेताहरूले Fiverr मा pinterest सेवा प्रस्ताव गर्छन् तर मेरो अनुभवमा उनीहरूले मेरो वेबसाइट SEO मा वृद्धि गर्न सक्दैनन्। मलाई थाहा छैन किन।
किन Pinterest SEO को लागी राम्रो छ कारणहरु:
1. Google को सोशल मिडिया सिग्नलमा रुचि छ त्यसैले यसलाई लिङ्क फार्मको रूपमा ट्याग गरिने छैन।
2. एक पटक हाम्रो वेबसाइट पिन गरेपछि यसमा3ब्याकलिङ्क गणनाहरू छन्।
3. एङ्कर पाठलाई समर्थन गर्दैन (url लिङ्क बाहेक), यो अझै पनि विवरणमा हाम्रा किवर्डहरू राख्नको लागि उपयुक्त छ। गुगलले पढ्नेछ !!
4. तपाईंले आफ्नो वेबसाइट SEO मा वृद्धि प्राप्त गर्न आफ्नो पिनको लिङ्कहरू पिङ गर्न आवश्यक छ।